Ny eva miendrika efamira no famantarana ny fanamainana lamba.
Ny sary boribory ao anatiny dia milaza ny fanamainana amin’nyvaringarina mihodina ao anaty milina. Ny tsipika mitsangana na mitsivalana kosa dia milaza ny fanamainana amin’ny fomba natoraly
Ny tsipika mitsangana dia milaza fa ahantona amin’ny tady ny fanahazana ilay lamba. Ny tsipika mitsivalana kosa dia milaza fa ampandriana ny fanahazana ilay lamba.
Ny tsipika misompirana amin’ny zorony ambony dia milaza fa amin’ny aloka ny fanahazana ilay lamba
Fanamainana amin’ny varingarina mihodina ao anaty milina
Fanamainana amin’ny hodina antoniny araka ny fetran’ny milina amin’ny hafanana tsy mihoatra ny 80°C.
Fanamainana amin’ny hodina malefaka ary amin’ny hafanana tsy mihoatra ny 60°C.
Tsy azo amainina amin’ny varingarina mihodina
Misy karazana lamba tsy azo amainina amin’ny varingarina mihodina toy ny akanjoba vita amin’ny hasy izay mora mifintina, ny volonondry mora mitsiboloka, ny lasoà sy akrilika tsy mahazaka hafanana, ny lambam-baravarana mora miforiporitra sns.
Fanamainana amin’ny fomba natoraly (amin'ny hainandro)
Azo fiazina amin'ny milina ary ahahy amin’ny tady.
Tsy azo fiazina amin'ny milina ary ahahy amin’ny tady. Lamba tsy mahazaka hodina milina toy ny lasoà
Ampandriana. Lamba vita tenona matevina na vita amin'ny volonondry
Tsy fiazina ary ampandriana. Lamba vita tenona maroraka
Mety mahavasoka na mahamavoka lamba ny fanamainana amin'ny hainandro
Fanamainana amin’ny fomba natoraly (amin'ny aloka)
Ahahy amin’ny tady anaty aloka (tsy azo atao mitanina andro)
Tsy fiazina ary ahahy amin’ny tady anaty aloka (tsy azo atao mitanina andro)
Ampandriana anaty aloka
Tsy fiazina ary ampandriana anaty aloka
Amaino avy hatrany fa aza avela hijanona ela ao anaty milina fanasana ny lamba vao avy nosasana fa miteraka fofona;
Fiazo tsara, raha azo atao, ny lamba alohan’ny hanamainana azy;
Aza atao feno loatra ny varingarina fanamainana;
Ampiaraho ny lamba izay mitovitovy fotoana fahamainana: ny lamba vita amin’ny hasy sy ny saintetika ohatra tsy miaraka maina;
Pejy teo aloha: Famotsiana << | >> Pejy manaraka: Fipasohana